Kutarisira vashandi neMintHCM. Chishandiso chakavhurika sosi | Linux Vakapindwa muropa
Kutarisira vashandi neMintHCM. Muchinjikwa-chikuva chakavhurika sosi chishandiso
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Free Software, Linux software
Kuenderera mberi neyedu runyorwa rweakavhurika sosi maturusi ehurongwa hwevashandi, tichaongorora mhinduro izvo zvakasiyana neiya yatakambokurukura mune yapfuura posvo kwete yakaderera-performance vhezheni. Isu tinoreva MintHCM (Hapana chekuita nekuparadzirwa kweLinux)
Nechirongwa ichi (Izvo zvinoda webhu server uye PHP) Masangano anogona kuronga, kufambisa, uye nekuchimbidza kutora, kudzidzisa, kuronga, uye mamwe mabasa ane chekuita neHR nemaitiro.
Sezvatakataura, iyi intuitive software iyo inopa masangano kugona kuigadzira zvinoenderana nezvavanoda chaizvo. Iyo sisitimu manejimendi mashandiro inopa vashandisi mukana wekugadzirisa iwo maitiro eiyo system.
Zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitwa nechirongwa ndezvi:
Wedzera tsananguro yebasa nekutsanangurwa kwakajeka kwemitoro yemunhu wega wega.
Tsvaga data rine chekuita nemishumo yekuongorora, mabhenefiti, mashandiro uye nzira dzebasa.
Coordinate basa kusimudzira mishandirapamwe.
Shandisa zvinyorwa zvekutarisa uye mamwe mafomu.
Iva nechengetedzo yakachengetedzeka yedata rako revashandi.
Tevedza hunyanzvi, kugona uye kufambira mberi kwemumwe mushandi.
Batanidza zviri nyore zvinyorwa zvemafaira, maspredishiti, mafomati anotakurika, mifananidzo, uye mamwe magwaro anodikanwa.
Chengetedza vashandi mwaka kuongororwa uye kubuda mabvunzurudzo.
Manage iyo nguva, karenda, kuronga uye kutonga kweanopinda uye anobuda.
Ronga nzendo uye kuronga mari.
Gadzira runyorwa rwezvigadzirwa uye zvimwe zvinhu zvakagoverwa kune vashandi.
Manage mvumo, ma boarding maitiro uye nzira dzekuzivisa.
1 Kugadzirisa vashandi neHCMMint. Chirongwa modules
1.1 Kuchengeta zviitiko
1.2 Tsananguro yebasa
1.3 Vashandi Maprofiles
1.4 Kukwanisa uye hunyanzvi
1.5 Nhoroondo yebasa
1.6 Kuita kwebasa
1.7 Nguva yekugadzirisa
Kugadzirisa vashandi neHCMMint. Chirongwa modules
Chirongwa Iyo ine akati wandei akapatsanurwa ma module ane chekuita nekutora vashandi.
Zvimire: Iyi module inobvumira mushandirwi chengetedza rakarongeka sangano rehurongwa uye chengetedza rakazara kabhatani retsananguro dzebasa.
Kubatira: Pano ruzivo nezve zvakarongwa, zviri kuenderera uye zvekare kugamuchirwa zvakanyorwa. Zvinyorwa zvinosanganisira minda senge zita, tsananguro, zuva rakatarwa, mari inofungidzirwa, uye chinzvimbo.
Vadzidzi: Pano vanhu vanofarira vanogona kubatanidza magwaro senge kutangazve, tsamba dzekurumbidza, mareferenzi, nezvimwe.. Ivo zvakare akachengetwa ruzivo rwekutaurirana, zvinongedzo kumaakaundi enhau enhau, ruzivo rwekudiwa kwekutama, pamwe nerumwe ruzivo rwakakodzera.
Kusarudzwa: Iyi module inochengetedza iyo data yevanhu vanofarira basa. Iyo inoratidza uko mukwikwidzi akawana kupihwa kupi, izvo zvavanotarisira zvemari, ndezvipi zvibvumirano zvinoshanda, ndeipi mamaki iyo mukwikwidzi akagashira mune mamiriro eichi chikumbiro chakati, nezvimwe.
Vashandi: Pano Dzese data dzeavo vakapihwa dzinochengetwa Iwe haufanire kupinazve chero ruzivo rwakambopinda.
Mune module iyi Zvivakwa zvevanhu zvinotarisirwa nekuwedzera tsananguro dzakajeka uye dzinonzwisisika dzebasa remunhu wega wega, pamwe neruzivo nezve nzvimbo yavo munzvimbo yepamusoro yesangano. Uye zvakare, data rine chekuita nekutarisisa, mabhenefiti, zvisungo, mabasa uye nehunyanzvi mabasa anosanganisirwa.
Ino inzvimbo yehurongwa uko data rega rega revashandi rinochengetwa richichengetedza iyo ruzivo muchimiro chekatalog yakawanda. Munhu wega wega anogona kuongororwa nehukama hwavo, chinzvimbo, dhipatimendi, kana nhamba yefaira.
Kukwanisa uye hunyanzvi
Muchikamu chino ruzivo uye hunyanzvi hwakagadziridzwa nevashandi zvinoratidzwa muchimiro cherondedzero yematarenda uye hunyanzvi nechidimbu pane kufambira mberi kwake.
Kuchengetedzwa kwakachengeteka kwe zvinyorwa zvese zvakatsinhaniswa pakati pemushandi nemushandirwi nerutsigiro rwezvimiro zvakasiyana.
Ichi chikamu chinoumba nzvimbo inochinja-chinja yekuchengeta ruzivo nezve mashandiro emushandi wega wega, kuzadzikiswa kwezvinangwa, uye nerumwe ruzivo kushandira kuongororwa nguva nenguva uye kubvunzurudza kwekubuda.
Neichi chishandiso iwe unogona kuronga uye kuyera kutevedzera nemahedhi ebasa uye mashandiro evashandi panguva yekushanda.
MintHCM zvakare ine maturusi ekuvimbisa kuvimbika kwekambani, kutarisira mashandiro ebasa, kuteedzera zviwanikwa zvekambani zvakapihwa vashandi, kuteedzera kusavapo uye kuongorora ruzivo rwese rwunounganidzwa nemamwe ma module.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kutarisira vashandi neMintHCM. Muchinjikwa-chikuva chakavhurika sosi chishandiso
Kutarisira vashandi neSentrifugo, yemahara software application
Blender 2.90 ikozvino yave kuwanikwa, nekuvandudzwa kwekuita, kuwanda kwemahara kugarisana pamwe nekumwe kugadzirisa